Redstar August – Page2– A diary to share..
एउटा समय थियो जतिबेला १ रुपैंया का दुइवटा ल्याक्टो मिठाइ पाइन्थ्यो। मिठाइ त मिठो भइहाल्ने भयो तर ल्याक्टो सँग जोडिएको अर्को रमाइलो कुरा के थियो भन्दा त्यसको खोल तन्काएर एक हात लामो बनाउन सक्यो भने अर्को ल्याक्टो फ्रि मा पाइन्छ भन्ने हल्ला थियो। ल्याक्टो को खोल तन्काएर फ्रिमा ल्याक्टो खाने प्रयास धेरै पटक गरियो तर कहिल्यै सफल भैएन।
भर्खरै पैताला पढेर सकेँ। पढिसकेपछि मलाइ लाग्यो जसरि हामि सानोमा ल्याक्टो को खोल तन्काउँदा त्यो खोल केहि तन्के पछि बिचमा प्वाल पर्थ्यो वा च्यातिन्थ्यो त्यसरी नै लेखक ले कथा लाइ जबरजस्ती तन्काए जस्तो लाग्यो। लेखक ले कथामा प्वाल नपरोस वा नच्यातिओस भनेर सक्दो कोसिस त गरेका छन तर मेरो बिचारमा त्यो सफल भने भएको छैन।
अर्को कुरा यो ल्याक्टो चलन चल्तीको ल्याक्टो भन्दा फरक हो तान्त्रिक ल्याक्टो हो भनेर बजारमा सुनियो। नयाँ भनेपछि केहि त पक्कै छ भनेर उत्सुक भैयो र खाने रहर पनि जाग्यो। तर खाएपछि भने तान्त्रिक शब्द लाइ अन्याय पो भएको हो कि जस्तो लाग्यो वा भनौ तान्त्रिक विदान भनेको यस्तै हो र? जस्तो प्रश्न उठ्यो मनमा । त्यस्तै स्वाद भएको चकलेट त पहिल्यै नगरकोटी ले खुवाएकै हुन नि जस्तो लाग्यो नगरकोटीएन फ्लेवर मा त ठिकै लागेको हो तर पौडेल फ्लेवरमा त्यो त्यति मिठो लागेन।
र अन्त्यमा पौडेल फ्लेवर ट्राइ गर्नुस भन्छु के थाहा त्यो तपाँइको फ्लेवर पो हो कि!
Category: General, Uncategorized | LEAVE A COMMENT
के यो माया हो?
उसको बारेमा नसोचेको समय हुदैनथ्यो। मेरो अवस्था कस्तो थियो भन्दा मन उसै सगँ पठाँएको थिय र दिमागमा उसैलाइ बास दिएको थिय। कहिले लागथ्यो फोन गर्छु, नाम सोध्छु, ठेगाना सोध्छु, किताब कस्तो लाग्यो सोध्छु। गफ गर्छु। अनि फेरि लागथ्यो ह्या… मुला भर्खर चार दिन अगाडि त भेटेको यति छिटै फोन गर्दा के सोच्ली उसले? कस्तो हावा केटा रैछ भन्ने सोचि भने! इम्प्रेसन को कुरा छ भैरे हतार नगर भन्ने लागथ्यो। यहि दोधार हुदाँ हुदै एक हप्ता बित्यो।
शनिबार को दिन थियो। उ सँग अलि अलि रिस उठिराथ्यो। यत्रो दिन भैसक्यो एक कल त गर्नु नि यार। मेरो त नाम पनि भनेको थिय, फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु।फेरि याद आयो,फेसबुकमा अर्कै नाम पो छ त यार। नाम चेन्ज गरेर सचिन नै राखुम कि जस्तो पनि लाग्यो तर सोचें एक कल फोन नगर्नेको लागि के नाम चेन्ज गर्नु।
फोन बज्यो। उसलाइ भेटेको दिन पछि हरेक पटक फोन बज्दा उसैको कल पो आयो कि झै लागथ्यो। यो एक हप्तामा धेरे जनाले मेरो चाइनिज फोनको रिगंटोन बजाए तर उसको कल आएन। यो पटक एकजना दाइ ले कल गर्नु भएको रैछ। निम्तो दिन! दाइ भाउजु को म्यारिज एनिभर्सरीको पार्टीमा निम्तो! भिड मन नपर्ने म फेरि यो सिड्नीमा नेपालीको पार्टि भनेपछि रमाइलो कम कम्पीटिसन बढि हुन्छ। एक मनले त नजाउँ कि जस्तो पनि लाग्यो तर फेरी सोचेँ यसै त यो ठाँउमा आफ्ना मान्छे कम छन् यसरी निम्तो कमै पाइन्छ, फेरी दाइ आफैले सम्झेर बोलाएपछि जानुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसैले जाने निर्णय गरियो।
चहलपहल राम्रै थियो पार्टीमा। मैले चिनेका अनुहार कमै थिय। गएर दाइ भाउजुलाइ बधाई दिदै हाजिरी गराइयो र प्रमाण स्वरुप फोटोग्राफर लाइ भनेर एउटा फोटो पनि खिचियो त्यसपछि गएर थुपुक्क बसियो कुनाको एउटा टेबलमा।
मोबाइल बज्यो। अच्चमै भयो! मोबाइल बज्नु अच्चम होइन। स्क्रिन मा Mystica Calling… थियो! त्यसैले अचम्म भो! रिसिभ गरिहाल्न मन थियो तर यो पापी मन ले रिसिभ गर्न हतार नगर भैरे भन्यो! थर्ड रिगं पछि त कन्ट्रोल गर्नै सकिन। रिसिभ गरे!
हेल्लो! सन्चै हुनु हुन्छ? उसले सोधी।
ठिकै छ! अनि तपाँइ? मैले भने।
बाँचेकै छु! उसले भनि।
उसको जवाफ सुन्दा लाग्थ्यो उसगँ मर्ने हजार कारण छन् तर पनि उ बाँचेकी छे।
किन यति निराश? मैले सोधे।
खै थाहा छैन। अनि तपाँइ पनि निराश देखिनुहुन्छ त! उसले सोधी।
छैन। म किन निराश हुनु! मैले भने।
यति रमाइलो पार्टिमा एक्लै कुनामा चुपचाप बस्ने मान्छेलाइ निराश नभनेर के भन्नु त? उसले भनी।
म एकछिन ट्वाँ परे! वरीपरी हेरें। पल्लो छेउको टेबलबाट उसले हात हल्लाइ। मैले देखेर हाँसे झै गरें उ पनि हाँसी।
उसले फोन मै भनि के पिउनुहुन्छ?
तपाँइ जे पिलाउनु हुन्छ त्यै पिउँला!
याँहानिर मैले उसको सुन्दरताको तारिफ गर्दै केही लाइन हरु लेख्नु पर्ने हो तर मलाइ विश्वास गर्नुस र माफ पनि गर्नुस म त्यो दुइ-तिन लाइनमा कुनै तरिकाले गर्न सक्दिन। यत्ति बुझ्नुस कि सि वाज लुकिगं ब्युटिफुल।
उसले दुइ ग्लास रेड वाइन लिएर आइ र म बसेकै टेबलमा बसी। एउटा ग्लास मलाइ दिइ मैले ग्लास ठोक्याउदै भनें “चियर्स”
तिन मिनेटको समय थियो म सँग। मनमा हजार कुरा थिए। मैले शब्द र मौनता बिच फेरी पनि मौनता रोजे। उ पनि मौन थिइ। मेरो मन ले अझैपनि उसलाइ रोक, जान नदे सचिन भन्दै थियो तर म मा त्यो हिम्मत थिएन।म उसलाइ बन्द पिंजडामा होइन खुल्ला आकाशमा उडेको हेर्न चाहान्थे। ट्रेनमा भेटिएका हामि ट्रेन स्टेसनमा छुटिदै थियौ।
म कलेज जादै थिए। ट्रेन मा यात्रा गर्दा पढ्नुको मज्जा ने बेग्लै हुन्छ। ब्यागमा नगरकोटी को “मिस्टिका” थियो। झिकेर पढ्दै थिय। कसैले बोलायो।
हेल्लो! तपाइँको बुकमार्क खसेछ। लिनुस।
सिड्नीको ट्रेन वा बसमा नेपालिमा बोलेको सुनिनु कुने अनौठो कुरा होइन। तर यति मिठो आवाज सायद पहिलो पटक सुनेको हुनुपर्छ मैले।
मिस्टर नगरकोटी को दुनियाँ बाट बाहिर निस्केर। म उसलाइ हेर्छु। बुकमार्क लिन्छु र धन्यवाद भन्छु!
उ सोध्छे “No Worries” लाइ नेपालीमा के भन्छ?
खै थाहा भएन!…… किन र?
म पनि नेपालि मै भनु कि भनेर नि! उ हाँस्दै भन्छे र फेरी सोध्छे, कस्तो छ किताब?
अल्लि different type को छ। तर राम्रो छ!
राइटर को हो?
नगरकोटी! कुमार नगरकोटी।(जेम्स बोन्ड स्टायल मा)
यस्तो नाम भको राइटर पनि छ? उ आश्चर्य मान्दै सोध्छे।
ऊसलाइ किताब दिदै भन्छु “पढेर हेर्नुस! I am sure you will love his writing!”
म घर लागेर पढ्छु नि हुन्छ?
हुन्छ तर पढिसकेपछि फिर्ता गर्नुपर्छ नि! हुन्छ?
ok! तपाँइको नम्बर दिनुस त! उ ब्याग बाट मोबाइल झिकेर मेरो नम्बर टिप्छे, उ मेरो नाम सोध्छे?
“सचिन” म मेरो नाम भन्छु।
उ झर्ने स्टेसन आइपुगेछ। हतार हतार उ झर्छे।
ट्रेन फेरि कुद्न थाल्छ!
मेरो मोबाइल मा नयाँ नम्बर बाट फोन आउछ! रिसिभ गर्छु।
यो मेरो नम्बर हो। अघि हतार भयो। सेभ गर्नुस है भनेर उसले फोन राख्छे!
म नम्बर सेभ गर्छु। उसको नाम मिस्टिका राख्छु।
मलाइ उसको नाम थाहा छैन। ठेगाना थाहा छैन। साँच्चिकै केहि पनि थाहा छेन!
उसलाइ थाहा छ कि छैन कुन्नि दश मिनेटमा उसले म सँग भएको किताब लिएर गइ र किताब को बिचमा कतै राखेको बुकमार्क जस्तै मेरो मन पनि लिएर गै!
Category: story | 1 Comment on के यो माया हो?
घडिमा रातिको १२ बज्नै लागेको थियो।सेकन्ड सुइ सधै झै हतार हतार गर्दै थियो, खै कति बजाउन हतार छ त्यसलाइ मलाइ थाहा छैन। जति दौडे पनि घुम्ने त त्यहि घडि भित्रै न हो तर पनि सेकन्ड सुइ अल्लि बढि नै हतार गर्छ। आखिर ब्याट्रि सकिएको दिन सबै सुइ सँगै रोकिने हो। नियम त त्यहि हो। चाहे घडि होस् या जिन्दगी।
असाइनमेन्ट को डेडलाइन छ आज जुन १२ बजे पछि सकिन्छ। मेल चेक गर्छु । लेक्चरर ले रिप्लाइ गरेको रैछ २ दिन एक्सटेन्सन दिएछ। र म यो लेख्न थाले। जय होस लेक्चरर को।
आजभोली म पनि सेकन्ड सुइ जस्तो भाको छु। थाहा छ पुग्नु काँहि छैन तर पनि घुमिरहेछु….दौडिरहेछु……दौडिरहेछु। मेरो आफ्नै मनले एकछिन पख सचिन भन्छ तर पनि नसुने झै दौडिरहेछ सचिन! यो सेकेन्ड सुइ दौडले काँही पुर्याउदैन थाहा छ तर पनि दौडिनु को बिकल्प छैन अहिलेका लागि।
कसैलाइ पर्खिरहेछु म। उ मुस्कुराउदै आउछे।म हतार हतार हिड्छु। उ मेरो हात समाएर भन्छे “कति दौडिएको? विस्तारै हिँड म सँगै हिँड”।बाटोमा उ गुन गुनाउछे मलाइ मनपर्ने गित र म सुनाउछु उसलाइ हिजो राति लेखेको पुरा हुन बाँकि मेरो आधा कविता।
सिमसिम पानि पर्छ। म कहिलयै छाता बोक्दिन । उसको झोलामा छाता कहिल्यै छुट्दैन। तर म सगै हुँदा उसलाइ पनि रुझ्न मन पर्छ। उसले छाता झोलाबाट निकाल्दिन। सिमसिमे पानि, चिसो बतास तर न्यानो यात्रा।
बाटोमा रोकिन्छे उ। मलाइ एकछिन यँही बस है भन्दै जान्छे बाटो छेउको कफि सप। फर्केर आँउदा लिएर आँउछे एउटा कफि। म सोध्छु मेरा लागि खै त? उ कफि सुरुप्प पार्दै त्यहि कप मलाइ दिन्छे म कपमा उसको माया पिउँछु।
बाँकी कथा पछि भन्छु! 
Category: General, story, Uncategorized | 1 Comment on के यो माया हो?
नयाँ वर्ष २०७४ को शुभकामना! हावा गफ- II
खै कता बाट सुरु गरौ?
सुरुवात अन्त्य बाट गर्न मन लाग्यो २०७३ सालको अन्त्य। यो साल सगैँ तपाँइका / तिम्रा / तेरा सबैका दुखका कारणहरुको पनि अन्त्य हुन भन्ने कामना र सुरुवात सुनौलो होस २०७४ सालको शुभकामना!
समय यथार्थ हो। घडि, क्यालेन्डर, तिथि, मिति यि सब भ्रम हुन्।
के के गरियो अहिले सम्म र गर्न बाँकी के के छ? यो हिसाब किताब गर्न छाडेको धेरै भयो। हिसाब किताब बिनै चलेको छ जिन्दगी आजभोलि…..! भरे कोहि आएछ र हिसाब खोजेछ भने देखाइ दिउँला यि हत्केलाहरु र भनौला यिनै हत्केलाका रेखाहरुमा छ मेरो जिवनको जोड घटाउ। तिमि सक्छौ भने पढ यो हत्केलाका लिपि।
आजभोली यि आँखामा धेरै नयाँ अनुहारहरु ठोकिन्छन। मलाइ तिनिहरुको कथा सुन्न मन लाग्छ र म सोध्छु पनि। समय छैन याँहा पुरै कथा भन्न र सुन्नका लागि त्यसैले होला धेरैले खिस्स हाँसेर एउटा मुस्कानमै 🙂 सकाउछन पुरै जिवन कथा र म बुझे जस्तो गर्छु यस्तो गर्दा मलाइ लाग्छ आजभोली म मुस्कानको भाषा,प्रेमको भाषा बुझ्ने भएछु।
जिवनको यो मोडमा कसैले घृणा सिकाएर गयो र थाहा भयो मलाइ बुझ्नु पर्ने घृणा रहेछ। घृणा बुझेपछि प्रेम छर्लगं हुने रहेछ।
प्रेम यथार्थ हो। नाता, सम्बन्ध, साइनो सब भ्रम हुन्।
जाँदा जाँदै एउटा कुरा भन्छु है?
तिमि र त्यो तिम्रो क्याट आइग्लास को कम्बिनेसनले कसैलाइ मार्न सक्छ बि केयरफुल!
तपाँइको/ तिम्रो/ तेरो सबैको आउने समय सुखद रहोस। २०७४ सालको शुभकामना!
सबैको जय होस!
बाटोमा धेरै पछी भेट हुँदा होस् ,फेसबुक मा च्याट वा फोन मा कुरा हुँदा धेरै ले सोध्ने पहिलो प्रश्न हो – “के छ?” “के गर्दै छस आजभोली?”
अनी यस्ता प्रश्नहरुको रेडीमेड उत्तर हुन्छ “ठिकै छ!”। तर यथार्थमा सबै कुरा ठीक कहिल्यै भएन जिन्दगीमा!
दिनहरु अली फरक तरिकाले बित्न थालेका छन आजभोली। श्रम र समय बेच्न थालेको छु। कसैको जागिर खाएको छु। जे गर्दै छु त्यसमा खुशी छु कि छैन मलाई पनि थाहा छैन तर दुखी छैन। सबै मेरा आफ्नै रोजाइ हुन। कती रहर का रोजाइ होलान कती बाध्यताका त्यो भिन्न कुरा हो। लाग्छ एक प्रकार को युद्ध पनि हो यो आँफै सँगको।
जिवनमा अगाडि आउने बाटाहरु को प्रस्ट नक्सा त छैन म सँग तर ति गएका दिन जती सजिला पक्कै छैनन मेरो सामान्य बुझाई हो यो आउने दिन हरु को लागि। अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को बिकल्प पनि त दिदो रहेनछ जिन्दगी ले।
डर भन्ने कुरा मन बाट बिस्तारै हराउदै गएको अनुभुती गर्न थालेको छु। हरेक कुरा लाई प्रेम गर्न थालेको छु। खुशी आफ्नै वरिपरी देख्छु। गुनासो पटक्कै गर्न मन लाग्दैन। आखिर गुनासो ले बोकेर ल्याउने नै त्यही दु:ख हो भने किन गर्नु गुनासो?
केही सपना हरु छन। सपना सँग जोडीएका आशा हरु छन बस् अहिले को लागि म सँग जे छन यिनै छन। जे छ ठिकै छ। जे हुनेछ ठिकै हुनेछ।
ग्लोबल वार्मिगं र मान्छे मान्छे बिच को सम्बन्ध मा केहि सम्बन्ध त पक्कै छ जस्तो लाग्न थालेको छ यार आजभोली। लौन कोहि रिसर्च गर्न इच्छुक हुनु हुनुहुन्छ भने गरिदिनुस मानव कल्याण को काम हुने थियो। मेरो खुबिले भ्याउदैन नत्र म आफै गर्ने थिय। जति जति यो ग्लोवल वार्मिगं बढ्दै छ याँहा सम्बन्धहरु झन् चिसा चिसा हुँदै छन्।
केहि समय यता मैले नजिक बाट देखेका केहि सम्बन्धहरु को तापक्रम नाप्नुपर्ने भयो र मैले नापे। ति सम्बन्ध को तापक्रम मैले सोचे भन्दा धेरै डरलाग्दो अवस्थामा पाँए। संसार सामाजिक सँजालमा सम्बन्ध बिस्तार गर्न तछाड मछाड गरिरहेछ तर वास्तविक जिवनमा सम्बन्धहरु फ्रिज हुने अवस्थामा छन् र कसैलाइ वास्ता छैन्। तपाइको दिमागमा अरु कसैको कुनै त्यस्तै सम्बन्ध को तस्बिर सम्झनु भयो होला! तर तपाइ आफ्ना सम्बन्धहरुको डिग्रि नाप्नुस त कति रैछ तापक्रम? याँह सम्बन्ध भनेर मैले कुनै एक खाले सम्बन्ध भन्न खोजेको होइन।
कति चिसा छन् है सम्बन्धहरु? किन होला?
कसै सगँ धेरै आशा गरेर हो कि!
केहि स्वार्थ लुकेका पो छन् कि सम्बन्ध भित्र!
सम्बन्धलाइ समय नपुगेको हो कि!
अरु कुनै कारण छ कि!
नेपालीमा एउटा उखान छ नि। “छोराछोरी आफ्ना राम्रा अनि स्वास्नि चाँहि अर्काको राम्रि रे”। अनि अर्को पनि छ “बाउ आमा को मन छोराछोरि माथि छोराछोरि को मन ढुगां मुढा माथि”।
मेरो बिचारमा कुनै पनि सम्बन्ध बोझ वा भार हुनु हुदैन्। चाहे त्यो बाबुआमा संगको सम्बन्ध होस या पति पत्नि वा गर्लफ्रेन्ड ब्वाइफ्रेन्ड वा अरु कुनै। स्वतन्त्र जिवन को अंकुश सम्बन्ध हुनु हुदैन। बेला बेलामा तापक्रम नापिरहनुस चिसो हुन लागेको भए संगै कफि खाएर हुन्छ कि रम खाएर हुन्छ चिसो हुन नदिनुस। निस्वार्थ सम्बन्धहरु धेरै कम हुन्छन् त्यसैले तिनलाइ फ्रिज हुनबाट जोगाउनुस।
के के न human psychology and relation जान्ने जसरि लेख्न खोजेको लेखे जति पढेको त केहि न काम को हावा लेखिएछ जस्तो लाग्यो र यो भन्दा बढि आदर्श को गफ नदे भन्यो मनले। बल्गमा पोस्ट पनि नगर भन्यो मनले तर यो मनले भनेका सबै कुरा मान्न पनि हुन्न अरे त्यसैले यता राखियो।
जाडो छ है बाहिर ? ल ल चिया,कफि, रम, भोड्का के के छ! पिउनुस रमाइलो गर्नुस। Happy New Year 2017! तपाँइ सबैको जय होस।
धन्यवाद! फ्रम बटम अफ माइ हार्ट!!
के लेख्नु? कति लेख्नु? कसरी लेख्नु? कसका लागि लेख्नु? सचिन ले लेख्यो लेखेन, के लेख्यो। हु केयर्स ?
जब लेख्न बस्छु यस्तै कुरा थुप्रिन्छन् यो घनटाउके खप्परमा तर मन ले भन्छ सोच्ने हरुलाइ सोच्न दे यार….तँ लेख न।
र मैले लेख्न थाले….
सबैलाइ। सबैको नाम लेख्न लागे भने लिस्ट लामो हुने भयो त्यसैले लेखिन। तपाँइलाइ विषेश धन्यवाद। किन….? किन भन्दा तपाँइ मलाइ विश्वास गर्नुहुन्छ । यो मुला ले के लेखेछ भनेर हेर्नु भयो। नत्र टाइम इज मनि को मन्त्र जप्ने यो जमानामा यस्ता नन्सेन्स बल्ग पढ्ने फुर्सद कसलाइ छ यार। कुरा नघुमाइ भन्नु पर्दा ज्यान अहिले अष्ट्रेलिया मा छ, सिड्नीमा। बिमिरापानि देखि याँहा सम्म को यो यात्रा मा सहयोग गर्ने सबैलाइ धन्यवाद! फ्रम बटम अफ माइ हार्ट!
म मान्छे स्वार्थी रहेछु। म भित्र एउटा लेभल को स्वार्थीपन छ। यो कुरा म अहिले बुझ्दै छु। तिनै स्वार्थ ले गर्दानै म अहिले याहाँ छु। भोलि जाँहा हुनेछु त्यसको पनि कारण यहि स्वार्थनै हो।मेरो स्वार्थका लागि अरु कसैको हानि/कुभलो नहोस भन्ने मेरो चाहना हो तर पनि नजानेरै मेरो कारणले कसैलाइ हानि गरेको भए माफ गर्नुहोला।फ्रम बटम अफ माइ हार्ट!
बाँकी गफ अर्को लेखमा गरौला। तपाँइ सबैको जय होस!!
बिम्ब! (उस्ले नपढ्ने कविता)
घामले सवेरै झ्यालवाट चिहाएर
सोधेको थियो एउटा सुनौलो प्रश्न
म कि उ?
मैले तिमिलाइ देखाँए।
हो त्यहि दिन देखि हो
घामले मेरो छाँया कालो बनाएको।
फूलले मुस्कुराउदै सोधेको थियो एउटा सुगन्धीत प्रश्न
मैले भने : उसकै मुस्कान राम्रो!
त्यहि दिन देखि उम्रेका हुन फूलको हागाँमा काँडा
र देखिन थालेको हो बिहान बिहान फूल मा शीतका आँशु!
बतासले सुसेल्दै सोधेको थियो मलाइ
मैले तिम्रो नाम सुसेलिदिए!
त्यहि रात हो हुरिले मेरो घरको छानो उडाएको।
जाँउ सँगै दुनिया घुमौला बादलले भन्थ्यो
मैले उसलाइ एक्लै छाडेर जान्न भनें।
त्यसै दिन देखि हो
छोप्न थालेको कालो बादलले आकाश
र पर्न थालेकोहो मुसलधारे पानी।
जाँउ सगैँ भेटाइदिन्छु समुन्द्र
नदि ले भन्थ्यो।
म तिमिलाइ छोडेर बग्दिन भने।
पानि ले आफ्नो रगँ लुकाएको।
मैले सागर देखेको छैन
तर भन्न सक्छु
तिम्रा आँखाको गहिराइ
सायदै कुनै सागरमा होला।
वर्षौको तपस्या पछि मिल्ने वरदान
तिम्रा सामिप्यतामा हुने आभास हो
तिमि आफैमा एउटा सुन्दर फूल हौ।
तिमि बिम्ब हौ पुरै प्रकृतिको!
Category: General, poem | LEAVE A COMMENT